ASTM Inch Hydraulic Butt Fusion Machines Manufacturers, Suppliers - China ASTM Inch Hydraulic Butt Fusion Machines Factory
Ngwa na Njirimara itable Kwesịrị ekwesị maka ịgbado ọkụ ọkụ nke ọkpọkọ plastik na akwa akwa nke Pee, PP na PVDF. A-ists Obere nke eku, haịdrọlik unit, atụmatụ ngwá ọrụ, kpo oku efere, nkata & nhọrọ akụkụ. Vable Mbughari PTFE ntekwasa kpo oku efere na elu ezi ezi okpomọkụ akara usoro. ► Low amalite nsogbu ana achi achi pụrụ ịdabere na ịgbado ọkụ àgwà nke obere ọkpọkọ. Changeing ịgbado ọkụ ọnọdụ na-enyere ka ịgbado ọkụ dị iche iche oyiyi akwa mfe. ► High mgbali elu na shockproof mgbali ...
24 ~ 36 inch butt fusion igwe
Ngwa na Njirimara itable Kwesịrị ekwesị maka ịgbado ọkụ ọkụ nke ọkpọkọ plastik na akwa akwa nke Pee, PP na PVDF. A-ists Obere nke eku, haịdrọlik unit, atụmatụ ngwá ọrụ, kpo oku efere, nkata & nhọrọ akụkụ. Vable Mbughari PTFE ntekwasa kpo oku efere na elu ezi ezi okpomọkụ akara usoro. ► Low amalite nsogbu ana achi achi pụrụ ịdabere na ịgbado ọkụ àgwà nke obere ọkpọkọ. Changeing ịgbado ọkụ ọnọdụ na-enyere ka ịgbado ọkụ dị iche iche oyiyi akwa mfe. Accurate High mgbali elu na shockproof mete ...
24 ~ 48 inch butt fusion igwe
2 ~ 6 inch butt fusion igwe
8 ~ 18 inch butt fusion igwe
4 ~ 12 inch butt fusion igwe